APT: lazainay aminao hoe inona ny faharefoana | Avy amin'ny Linux
APT: lazainay aminao hoe inona ny faharefoana
Efa naneho hevitra momba ity bilaogy ity izahay fa nisy fahalemena iray nanimba ny rafitra fiasa GNU / Linux sasany izay mampiasa mpitantana fonosana APT, izany hoe, ireo rehetra ireo fizarana izay azo avy amin'ny Debian, ary koa Debian tenany. Ao anatin'izany ny Mazava ho azy fa Ubuntu sy ireo rehetra izay avy amin'ny Canonical distro, noho izany ny lavaka fiarovana dia nisy fiantraikany tamin'ny rafitra fiasa maro, satria malaza be ireo karazana distros ireo.
Fa tsy tokony hatahotra ianao fa manavao fotsiny fa efa misy patches handrakofana an'io marefo ao amin'ny APT ary afaka manohy mankafy ny distro ara-dalàna ianao. Izany dia mitranga amin'ny fotoana maro sy amin'ny rafitra miasa rehetra. Ny fanavaozana ny fiarovana izay avoaka tsindraindray dia tsy inona izany fa vahaolana hialana amin'ny fandrahonana. Ary araka ny nolazaiko hatrany, ny Linux dia tontolo azo antoka tsy midika hoe azo antoka 100% izy, tsy misy rafitra ...
Ny programa Advanced Package Tool na APT no iray izay kintana tamin'ny vaovao momba ny filaminana amin'ity indray mitoraka ity, ary ilay mpikaroka Max justicz io no nahita ilay lavaka namela ny fanafihana MITM (Man In The Middle) ho tanterahina ary mamela ny mpanafika hilalao miaraka amin'ny fonosana .deb maloto mampiasa ny rakitra Release.gpg amin'ny alàlan'ny fifandraisana HTTP miaraka amin'ny mpizara fitaratra. Ity fanafihana ity dia azo atao lavitra ary misy fiantraikany amin'ny rafitray raha mbola tsy manavao izahay, ka tsy maintsy havaozinao hatrany ny distro anao.
Manantitrantitra aho fa ny fanairana dia tsy ny safidy tsara indrindra, havaozy fotsiny ny rafitrao Debian sy Ubuntu ary alao antoka fa mavitrika ao amin'ny rafitrao ireo fanavaozana. Efa fantatrao fa ny Debian 9.7 dia miaraka amin'ity fanavaozana ity ho toy ny mahazatra, ary aza atao ambanin-javatra raha manana distro toa anao ianao elementaryOSsns, satria miorina amin'ny Ubuntu izy ireo. Araka ny nolazaiko, misy lisitra distros lava voakasiky ny filalaovana be loatra amin'ny fampiasana ny Debian na Ubuntu ho toy ny fototra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » APT: lazainay aminao hoe inona ny faharefoana
Debian 9.7 Strech navotsotra niaraka tamin'ny patch APT